အိုးဝေ: တအူတုံဆင်း မောင်နှမရင်းတွေ
Posted by ဇနိ at 2:18 AM
မြရွက်ဝေ August 19, 2008 at 5:47 AM
အိမ်က ဂျစ်မောင်လေးကို သတိရသွားပြီ။ ညီမက အလတ်ဆိုပေမယ့် အငယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက် မရခဲ့ဘူး။ မောင်လေးအပေါ်ဘဲ အမကြီး တစ်ယောက်လို နေခဲ့ရတာ။ အမအကြီးဆုံးက အလျှော့မပေးတတ်တော့ အမြဲအလျှော့ပေးတဲ့ ညီမကို မောင်လေးက ပိုကပ်တယ်။ အမနှစ်ယောက်လုံး တရပ်တကျေး ကျောင်းသွားတက်ရတာချင်အတူ ညီမစီဘဲ စာရေးတာ။ အဆောင်မှာ ငိုနေမှာစိုးလို့ အမြဲ နောက်ပြောင်တဲ့ စာတွေ ရေးတယ်။ ကာတွန်းလဲ ဆွဲတတ်တော့ သူ့အမကို ပုံ အမျိုးမျိုးဆွဲပြီးနောက်တယ်။ သူ့စာလာရင် ညီမအပြင် တစ်ဆောင်လုံးက ဖတ်ပြီးပျော်ကြတယ်။ မနိ မောင်လေးလိုတော့ ကူဖော်လောင်ဖက် မရပါဘူး။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေဆုံးသွားတော့ သူ့ကို အဒေါ်တွေ အမတွေက အလိုလိုက်ထားသလို ဖြစ်နေတာ။ ဆိုးတော့ မဆိုးဘူးဆိုပေမယ့် သူ့ကို ခုချိန်ထိ စိတ်ပူနေရတယ်။ ဘုန်းကြီးဝတ်သွားရင် ကောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးနေတာ။ (ကိုယ်ကျယူပြီးတော့လေ :P)
မောင်နှမတွေ များတာ ပျော်စရာကောင်းတာတော့ အမှန်ဘဲ။ ငယ်ငယ်က ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ခေါ်လိုက်ပေမယ့် ကြီးလာတော့ ကိုယ့်မှာ ဒီမောင်နှမက လွဲပြီး ဆွေမျိုးရင်းတာ မရှိဘူးလေ။
အမျိုးထဲမှာ တဝမ်းကွဲ တဦးထဲသောသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ခမျာ ခလေးတုန်းက ကစားချင်လွန်းလို့ တခြားကလေးတွေကို အမြဲအလျှော့ပေး ဆော့ရတယ်။ နောင်ကျရင် မနိနဲ့ ကိုနိလည်း ကလေးတွေမပျင်းရအောင် 頑張ってねぇ。。。。:D
nu-san August 19, 2008 at 8:01 AM
အမလည်း အိမ်မှာ အလတ်ဆိုပေမယ့် အကြီးလိုဖြစ်နေတာ။ (ဟိုအပေါ်က ညီမလေးလည်း အလတ်ပဲလား.. :D) အမလည်း အကိုနဲ့မောင်ကို အခုထိ စိတ်ပူနေရတုန်းပဲ။ သူ့ဘာသာသူစိတ်ပူတာတော့ မတတ်နိုင်ဘူး ညီမရယ်။ သူတို့ကတော့ နင့်ဟာနင် အဆင်ပြေအောင်နေလို့ပြောပေမယ့် ကိုယ်က နဂိုကလည်း စိတ်ပူတတ်တာကိုး။ အမတို့မောင်နှမတွေကျတော့ ရန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိဘူး။ အမ အကိုက ညီမဆိုတော့ အပြင်တွေ ဘာတွေ သွားရင် မခေါ်ချင်ဘူး။ မောင်လေးကတော့ သီးခံတတ်တယ်။ အမ ဘယ်သွားသွား သူလိုက်တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၂ နှစ်ကြီး ၂ နှစ်ငယ်သာဆိုတယ် ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေကြတာ။ မဇနိရဲ့ ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အကိုနဲ့ မောင်ကို ပိုသတိရမိတယ်။ ဒီညတော့ ဖုန်းဆက်လိုက်ဦးမယ်.. :(
မောင်မျိုး August 19, 2008 at 8:32 AM
ကျနော်လည်း မဇနိလို အစ်မ တွေ ရှိတယ်း) အငယ်တည်းက ခေါ်ကြတဲ့ အတိုင်း ခုချိန် ထိ ခလေး ခလေး လို့ လာလာခေါ်ကြလို့အော်ထားရတယ် လူကြားထဲကျ ခလေးလာခေါ်နေကြရင် ဒီကောင် သူ့ ကိုသူတော်တော်ငယ်စေချင်လားမသိဘူးဆိုပြီး ဖြစ်မှာကြောက်လို့။ ဟုတ်တယ် အစ်မရေ့ တကယ်တော့ မောင်နှမဆိုတာ သိပ်ကိုနွေးထွေးတဲ့သူတွေပါပဲ တစ်ယောက် ၀မ်းနည်းရင် လိုက်ဝမ်းနည်း အပျော်ဆိုလည်း မျှဝေတက်ကြတယ် ။ တစ်ဦးတည်းသော သူတော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး သိပ်အထီးကျန်တယ်လို့ ထင်တယ် ဒါနဲ့စကားမစပ် အငယ်ဆုံးတွေက အလိုလိုက်ခံရ အချစ်ခံရတာများတယ် ဟီးး အစ်ကိုကြီးက စိတ်တိုလို့ ထုတော့မယ်ဆို အစ်မဆီပြေး အစ်မက ခေါင်းခေါက်မယ်ဆို အစ်ကို့ ဆီပြေးနဲ့သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတာ လွမ်းမိတယ် အဲ့တုန်းက အချိန်တွေကို .............
မောင်ဖြူ August 19, 2008 at 9:27 AM
မဇနိရေ၊ မဇနိတို့မောင်နှမတွေသံယောဇဉ်အကြောင်းဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ မောင်နှမလေးယောက်ဆိုတော့ မိသားစုတောင့်တယ်ပြောရမလားပဲ။ အစ်မတော့မရှိဘူး။ ကျန်တာအကုန်ရှိတယ်။ အစ်မတွေကတော့ မောင်တွေ။ ညီမတွေကို ပိုချစ်တတ်ကြတယ်ထင်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ အစ်မတစ်ယောက်လောက် လိုချင်ခဲ့သား။ အစ်ကိုကလဲတော်ပါတယ်။ စိတ်ကြီးတာကလွဲရင်ပေါ့။ မဇနိလဲ မဇနိမောင်လေးတွေနဲ့အတူ တစ်သက်လုံးချစ်နိုင်ပါစေဗျာ။
တားမြစ် ထားသော... August 19, 2008 at 11:50 AM
မဇနိ ဖတ်ကောင်းတယ်။ သံယောဇဉ်တွေကို ခံစားမိတယ်။ စိတ်မကောင်းတာကတော့ ကိုဇနိကို မျှဝေခံစားမဲ့သူလို့ မယုံကြည်တာပါပဲ။
Republic August 19, 2008 at 3:36 PM
စာရေးအရမ်းကောင်းတဲ့ မမနိ ရေ ၊၊ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ် ၊၊ မမနိရဲ့ မောင်လေးတွေဖြစ်ရတာလည်း ကံကောင်းပါတယ်၊၊ မမနိက အရမ်းနားလည်ဂရုစိုက်တတ်တာကိုး ၊၊ တော်ဒယ်ဗျာ ..တို့ရဲ့ မဇနိ ကြီးကွ၊၊
ကိုဇနိ ကြီးရေ ... ဘာမှမပူနဲ့နော်၊၊ မဇနိကြီးရှိတယ် ၊၊
ဇနိ August 19, 2008 at 3:46 PM
သူရှိနေရင် ကျနော်က ဘာမှကို မပူတာ ကိုကြီးဝီ..
ကို VBT ရေ...
ပြောတယ် မဇနိ ကို ..နာကကျတော့ မဝေမျှတာကြလို့ဆိုတော့...
မောင်မျိုးရေ - သူကလည်း မောင်လေးတွေကို ခလေးခလေးနဲ့ အားကြီးခေါ်တာ...ဟိုက အသက်တွေကနည်းတော့တာလည်း ဟုတ်ပဲနဲ့..ပြောမရဘူး...
အမကြီး နုစံ - ဖုန်းဖိုးကို မဇနိဆီတောင်းလိုက်..
မြရွက်ဝေရေ - သူလည်း မောင်လေးတွေကို ဘုန်းကြီးဝတ်စေချင်တာပါပဲ..
ဂျစ်တူး - gyit_tu August 19, 2008 at 6:40 PM
မဇနိရေ ဒါလေးဖတ်ပြီး တကယ် ကြည်နူးမိတယ်း)
khin oo may August 19, 2008 at 8:12 PM
တို.ကတော.တို.မောင်လေးကို စိတ်ကုန်လို. မိန်းမယူသွားတော.ဝမ်းသာလိုက်တာ. ခိုးပြေးမယ် ဆိုလို.လမ်းစရိတ် ကိုးဆယ်တောင် ပေးလိုက်သေးတယ်။ တော်ရဲ.သားနဲ.စာမကျက်. ချက်ထိုး အိမ်မပြန်. ဘီယာသောက်. လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်.
May Moe August 19, 2008 at 8:32 PM
မောင်လေး ရှိဝူး ။ ညီမလေး တွေကြီးပဲ။ မမနိ စာလေးတွေဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်
အညာသား August 20, 2008 at 2:50 AM
ကျနော်ကတော့ အကြီးဆုံးဗျ။ အငယ်တွေကို သတိရလိုက်တာဗျာ...။
မဇနိ August 20, 2008 at 8:15 AM
ဟုတ်ကဲ့ မမဂျစ် ကျေးဇူးပါ
အစ်မကတော့ စံ ပဲနော် မမကေအိုအမ်
ညီမလေးတွေလည်း ချစ်စရာကောင်းတာပေါ့နော် မေမိုး
ဒါဆိုမုန့်တွေဝယ်ကျွေးလိုက် အိမ်ပြန်ရင် :P
ညီမမြရွက်ဝေ သူကျတော့ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး မတရားဘူးနော်
မမနုစံ စိတ်ပူတာတော့ တားလို့ရဘူးနော်။ ဒါနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြီးပြီလား :P
ဟိုပြေးကပ် ဒီပြေးကပ် ချွဲတဲ့ လူလည် ကြောင်လေးပေါ့ မောင်မျိုးက ခုလည်း ခလေးပဲ ခွိခွိ
ကိုမောင်ဖြူ့အစ်ကိုကြီးက စိတ်ကြီးပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတယ် ဟုတ်
ကိုတားမြစ်ထားသော နော် အချွန်နဲ့မ မနဲ့အုံး ဒီမှာ ရန်လုပ်နေတာဗျ
ကိုကြီး ၀ီ ရေ ကိုဇနိကိုကျတော့ ဂရုစိုက်တော့ ၀ူး
တန်ခူး August 20, 2008 at 12:48 PM
မဇနိတို့ မောင်နှမတွေ အကြောင်း ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရလေး… တို့ တွေနဲ့ တော့ ကွာပါ့… တို့ မောင်လေးနဲ့ တို့ က ရန်ဖြစ်ရင်း သတ်ရင်း ပုတ်ရင်း ချစ်ကြတာ… မဇနိမောင်လေးတွေက အရမ်းလိမ္မာပုံပဲ…ဒီခေတ်မှာ အဲလိုကလေးတွေ ရှားသွားပြီ… တို့ မောင်လေးကတော့ တကယ့် Heavy Rock… နီးတကျက်ကျက် ဝေးတသက်သက်… ဝေးနေတော့လဲ လွမ်းမိပြန်ရော…
ရိုးရိုး August 31, 2008 at 4:21 AM
အနည်းဆုံး ကလေး သုံးယောက်တော့ ယူရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆတော့ ရှိပါတယ်။
နှစ်ယောက်က မိဘတွေ ကို အစားထိုးဖို့ နဲ့ ကျန်တစ်ယောက်က နိုင်ငံတော် အတွက်တဲ့။
ဟဲဟဲ ဒီအထဲ က မေမိုး ကို ပဲ ခင်လိုက်တော့မယ် :P